Fifamoivoizana kendrena maimaimpoana ho an'ny firafitra | Fifamoivoizana hiara-miasa
Tsy misy firafitra Targeted Traffic
Ny sandan'ny tranonkala kendrena tranonkala ny fifamoivoizana dia tsy afaka hitovy amin'ny an'ny fifamoivoizana tsotra fotsiny. Ireo mpitsidika izay tarihina haingana amin'ny tranokala manokana, na dia maimaimpoana tanteraka aza, raha tsy fantany mihitsy hoe inona ilay tranonkala, dia azo inoana fa handao ireo pejin-tranonkalanao haingana be toy ny fomba nidirany tamin'izy ireo.
09/24/2021 08:05 hariva GMT
Eny, ny tranonkala dia fotoana iray ahazoana tombony mahafinaritra ary na ny fifamoivoizana kendrena maimaimpoana aza dia mety azo. Tsy tonga izany raha tsy eo ny ezaka ataonao. Ireto misy sosokevitra vitsivitsy hananganana fifamoivoizana kendrena maimaimpoana tanteraka.
Tranonkala bilaogy. Tsy tokony ho sarotra ho anao izany raha manana hafanam-po amin'ny famoronana ianao ary tsy maninona ny fizarana ny foto-kevitrao amin'ny tranonkala. Ireo tranokala bilaogy dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hahazoana fifamoivoizana kendrena "tena izy".
Ny fahalalahana hanambara ny hafatrao amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara dia manome anao fotoana hanoratana ny sain'ny mpamaky amin'ny alàlan'ny fahaizanao manoratra miaraka amina sary manaitaitra sasany izay ahazoana antoka fa mamelona ny fahalianana. Rehefa manoratra tranokala bilaogy ianao dia manana safidy hafa hamindra ny tranokalanao amin'ny mpamaky anao (tsy vita mihitsy) na manao azy amin'ny fomba tsy dia mazava loatra.
VAKIO IZANY Ahoana ny fomba hahatratrarako ny fifamoivoizana amin'ny bilaogiko? Fantatrao ny ...
Azonao atao ny mamoaka doka amin'ny tranokalanao, mampiditra rohy amin'ireo fanehoan-kevitra lehibe rehetra izay hitarika fifamoivoizana kendrena mankany amin'ny tranonkalanao rehefa kitihina. Betsaka ny tranokalan'ny bilaogy amin'ny internet izay azonao trandrahana maimaim-poana.
Ity koa dia fomba iray hafa ahazoana fifamoivoizana kendrena tsy andoavam-bola. Mety misy toe-javatra mety ahafahanao manondro ny tranokalanao ho ampahany amin'ny valinteninao, na mety mila mampiasa paikady ianao hametrahana izany ho toy ny valinteninao voalohany.
Matetika, ary ity no fomba azo antoka indrindra hanehoana ny tranonkalanao ahafahana miaro ny fivezivezena kendrena maimaimpoana, ampidiro ao amin'ny sisin-tananao ny fonenan'ny tranonkalanao Aza faly amin'ny fametrahana ny anaranao fotsiny amin'ny faran'ny valinteninao. Apetraho ny fonenanao sy ny URL mba hahafahan'ny mpamaky (izay liana amin'ny lohahevitra forum an-tserasera, izay an'ny toetoetran'ny tranokalanao) hisafidy azy ireo ary hiafara amin'ny ampahany amin'ny fivezivezena kendrenao maimaimpoana tanteraka.
Malalaka tanteraka ihany koa ianao amin'ny fikarohana amin'ny Internet ho an'ny fifanakalozana rohy sy fandraisana ireo tranonkala miaraka amin'ireo tsena mifandraika aminao. Hamarino tsara fa hanome fampahalalana rohy mazava (lohateny mahaliana, famaritana mazava ary URL marina) hisarihana fifamoivoizana kendrena avy amin'ireo tranokala izay mety ho liana fatratra amin'ny fitaovan'ny tranonkalanao koa ny mpitsidika.
Ny lanjan'ireo fifamoivoizana an-tranonkala lasibatra dia tsy afaka hitovy velively amin'ny fifamoivoizana maimaimpoana tanteraka. Eny, ny tranonkala dia fotoana iray ahazoana vintana mahatsiravina izay mety hahazo mihitsy aza ny fifamoivoizana kendrena maimaimpoana tanteraka. Raha ny mahazatra, ary ity no fomba azo antoka indrindra hanehoana ny tranonkalanao raha te hanana fifamoivoizana kendrena maimaimpoana ianao, ampidiro ny anaran'ny tranonkalan'ny tranonkalanao eo amin'ny sisin-tananao. Apetraho ny anaranao sy ny URL mba hahafahan'ny mpamaky (izay liana amin'ny lohahevitra forum an-tserasera, izay mifandraika amin'ny natioran'ny tranokalanao), misafidy ny hanindry azy ireo ary noho izany antony izany dia tafiditra ao anatin'ny kendrenao maimaimpoana tanteraka ianao fifamoivoizana.
Hamarino tsara fa manolotra fampahalalana rohy mazava (lohateny mahaliana, famaritana mazava ary URL marina) hisarihana fifamoivoizana kendrena avy amin'ireo tranokala izay mety ho liana fatratra amin'ny fitaovan'ny tranonkalanao koa ny mpitsidika.